Rusheyn kartaa filler Masterbatch
Guangzhou Yangtian Environmental Masterbatch Co., Ltd. la aasaasay sannadkii 2002, waa mid ka mid ah ganacsiga Sayniska-casriga ah ka go'an in ay cilmi-baarista iyo horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta masterbatch functional caag ah. waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Defoaming Masterbatch, filler Masterbatch, Carbon Black Masterbatch, TiO2 White Masterbatch, iyo Color Masterbatch, wadar ahaan 5 nooc. Shirkadda Waxaan leeyahay saddex warshadood oo daboolaya meel ka mid ah 21,000 oo mitir oo laba jibbaaran, 15 khadadka-soo-saarka, awoodda wax soo saarka billaha ah ee dhammaan noocyada kala duwan masterbatches gaaraan ilaa 5,000 metric, jiida network iibka oo dhan Shiinaha, Europe iyo America, Bariga Dhexe, Southeast Asia, Africa, India, iyo dalalka kale.
Hoggaansamaan mabda'a adeegga "noolaadaan la Quality, In la sameeyo oo la Kalsoonida" ah, Yangtian leedahay koox xirfad farsamo iyo qalab caalamiga ah wax soo saarka sare iyo qalabka jirrabaya. Si inay ku baaqaan in tayada wax soo saarka dheeraad ah oo la isku halayn karo iyo wax qabadka wax soo saarka dheeraad ah oo deggan, Shirkadda adag qalab a set of nidaamka tayada dhamaystiran oo ku saabsan alaabta waxyaabaha our ayaa maray ISO9001:.. 2000, SS-00259 iyo heerarka kale ee caalamiga ah, helay shahaado SGS jirka shahaado awood adduunka ee raaxaysta sumcad wanaagsan in industry this a, iyo ku guuleysan taageerada ballaaran oo isku hallaynayay tan our macaamiisha.
Ku tiirsan nidaamka maareynta dhamaystiran iyo awood cilmi & horumarinta xirfadeed, waxaan qaadi karaan waxyaabaha cusub sida ay macaamiisha iyo baahida suuqa, si ay macaamiisha kulmaan baahida iyo in la hubiyo tayada wax soo saarka iyo tayada adeegga adkeysan karaan kormeerka macaamiisha. Waayo gool, iyadoo wax soo saarka oo tayo sare leh iyo adeegga ugu fiican, waxaan si daacad ah ugu yeedhi saaxiibo ka dhan socdaa nolosha si ay u horumariyaan iskaashiga baahsan, la abuuro wada guul!
Cinwaanka: NO.568, Floor 5aad, Dhismaha B, No. 3, Nanpu Bigui Road, Luopu Street, Degmada Panyu, Guangzhou City, Shiinaha
Anti Foam Masterbatch, Film Cao Masterbatch, Plastic Masterbatch Calcium Oxide, Cao Anti Foam Masterbatch, Plastic Defoaming Masterbatch, Water Absorption Masterbatch,